Sidee bay u shaqeeysaa qaadashada lacagta caddaanta ah / kaashka ah? – Transfer Galaxy
Soomaali English Svenska Af-Soomaali عربي درى Türkçe ไทย
Isticmaalka Transfer Galaxy
Sidee bay u shaqeeysaa qaadashada lacagta caddaanta ah / kaashka ah?
Kaliya u dooro qaadashada lacagta caddaanka ah / kaashka ah si ah habka bixinta iyo ka dibna dooro bixiyaha qaadashada lacagta. Marka lacag bixintaada laga shaqeeyo, diraha iyo qaataha labadaba waxay helayaan fariin qoraal ah oo uu la socdo tilmaamaha qaadashada lacag caddaan ah / kaash ah iyo koodka lacag-bixinta.
Si loo qaato lacagta la soo wareejiyey / la soo xawilay, qaataha wuxuu u baahan doonaa (i) AQOONSI sawir leh oo muddadiisa socota oo muujinaya magaca oo buuxa oo u dhigma faahfaahinta uu soo galiyay diraha iyo (ii) koodka lacag bixinta, oo lagu sheegay farriinta qoraalka.
Fadlan ogow: Meey 2020 waxan shaqo la bilawnow shirkad cusub, taas micnaheeduna yahay in goobo cusub oo lacag qaadasho aan ku so darnay adeega wadamada: Egypt, Jordan, Morroco, Pakistan, Qatar, Turkey, UAE iyo Yemen. Si aad u hubiso in dadka aad jeceshahay ay uga qaadan karaan xarumaha qaadashada mid ka mid ah, dooro wadanka aad u diraysid halkan si aad aragto liiska oo dhan.